11 septembre 2015 - Page 4 sur 4 - Midi Madagasikara
Toamasina : Olona 19 tratra nifoka sy nivarotra rongony
Ao anatin’ny ady ataon’ny polisy amin’ny fidorohana rongony sy araka ny baikon’ ny lehiben’ny fampanovana, dia mitohy ny hetsika ataon’ny polisy mikasika izany ka ny talata teo dia mpifoka rongony 05 ka iray vehivavy sy mpivarotra izany izay renim-pianakaviana, no sarona tao Ambalamanasy “carreau I”. Fonosana rongony 21 milanja eo amin’ny 02 kgs teo no…
Financement étranger : Une Mission du FMI à Madagascar
La situation de l’économie à Madagascar est examinée de près par le FMI (Fonds monétaire international). Une Mission conduite par Marshall Mills est dans la Grande Ile du 10 au 22 septembre 2015, dans le cadre de l’octroi de facilité de crédit rapide pour Madagascar. « Nous voulons comprendre le contexte et les problèmes économiques dans…
Toliara : Vehivavy voalaza fa mpamosavy, saika matin’ny fitsaram-bahoaka
Vehivavy iray sahabo ho 45 taona, voatondro ho mpamosavy, nandihindihy teo an-tokonam-baravaran’olona alimbe no naratra mafy vokatry ny daroka sy vono nahazo azy, ary saika nanaraka hatramin’ny ain-dehibe mihitsy raha nisy kely, afak’omaly, tao Ampasikibo Toliara. Taitra tamin’ny torimasony ny raim-pianakaviana iray tao an-tranony raha nahare feo hafahafa tany an-tokotaniny. Namoha ny zanany lahy roa…